Omany ny Vazelinina sy Tampim-Bavanareo—Fotoanan’ny Sery Izao Any Japana Noho Ny Tsy Fahazakàna Vovobony · Global Voices teny Malagasy
"I must have sneezed about 60 times just today!"
MpanoratraSarah Lee Stones
Voadika ny 25 Avrily 2017 12:51 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Español, English
Tampim-bava fanaovan'ny dokotera mpandidy hita manerana an'i Japana, indrindra mandritra ny fotoana maha-sarotin-tsery. Sary avy amin'ny mpisera amin'ny Flickr David Shackelford. Lisansa : Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0).
Ny toetrandro malefaka sy ny hatsaran'ny famelanan'ny voarohy no tsy isalasalàna fa mahatonga ny lohataona ho vanintaona tsara indrindra any Japana. Maro amin'ireo mpitsidika ny firenena no mikajy tsara ny fotoana handehanany any mba hifanojo amin'ny fotoam-pamelanan'ireo hazonà voarohy miparitaka manerana ny firenena.
Na izany aza, tsy ankasitrahan'ny japoney sasany ny fahatongavan'ny vanim-potoana mafana. Mitondra loza mananontanona tsy hita maso mantsy izy, raha ny marimarina kokoa.
Rakotry ny vovobony mampievina, mampi-tsotsorika lelo, mampangidihidy maso ary maha-voan'ny sery noho ny tsy fahazakàna az,y ny rivotry ny lohataona manerana ny tangoronosy japoney.
Tsy famelànan'ny hazonà voarohy fotsiny no dikan'ny lohataona any Japana
Rehefa misaina ny fotoan'ny lohataona any Japana ianao, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ireo sarin-drahon'ny vonin-dandihazo mavokely, fantatra amin'ny hoe sakura (桜) amin'ny teny japoney. Mivelatra aloha kokoa ny voninkazo any amin'ny faritra atsimo andrefan'i Japana, avy eo miitatra mianavaratra sy miatsinanana manerana ny tangoronosy izany, ary fantatra amin'ny hoe “fotoana famelànan'ny voarohy” na sakura zensen (桜前線).
Manao ahoana ! Mivelatra tanteraka ny vonin'ireo voarohy namelana voalohany !
Fa tsy ny famelànan'ny voninkazo ihany no zava-misy any Japana rehefa manomboka mafana ny andro. Manidintsidina avy any avaratra mianatsimo ihany koa ireo rahonà vovobony, ka miditra anaty oron'ny tsy mahazaka azy.
Ny Fijalian'ny Japoney Isan-taona Noho Ny Vovoboninà Sedera
Tsy ny voninkazo no mahatonga ny sery azo avy amin'ny tsy fahazakàna vovobony any Japana, fa ireo vovobony avy amin'ny hazo. Indrindra fa ny sedera japoney na sugi (杉, Cryptomeria japonica) sy ny kypreso japoney na hinoki (檜, Chamaecyparis obtusa).
Hazo sedera mamoaka rahonà vovobony mahasarotiny (allergie). Sary avy amin'ny mpisera amin'ny Flickr Andy Heatwole. Lisansan'ny sary : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).
Ho an'ny faritra any andrefana sy ny atsinanan'i Japana (ao anatin'izany i Tokyo), dia eo anelanelan'ny faran'ny volana Janoary sy ny tapaky ny volana febroary, fiantombohana'ny andro mafana, no manomboka fotoanan'ny tsy fahazakàna vovobony. Ny faran'ny volana Martsa sy ny fiandohan'ny volana Aprily no betsaka ny vovobony vokarin'ny sedera ary avy eo mihena tsikelikely izany, raha toa ka tara iray volana ny an'ny kypreso.
Japoney maro mpisera amin'ny aterineto no nilaza ny soritr'aretiny tao amin'ny Twitter.
Mihetsika ny seriko ary maharikoriko ahy aho…!
Isaky ny tsy mampiasa famaohana aho, mirotsaka ny leloko, nefa tafiditra amin'ny fahitàna ahy izao izany.
Tsy maintsy efa nievina in-60 eo ho eo aho androany!
Tooooooonga… ny vovobony!!!
Manaraka ny ” Fotoanan'ny Vovobony Sedera”
Arahana sy taterin'ny haino aman-jery japoney amin'ny fomba mitovy hatrany ny fotoam-pamelànan'ny hazonà voarohy isantaona. Asehon'ny sary eto ambany ny fivoaran'ny ” fotoanan'ny vovobony sedera” na sugi kafun zensen (スギ花粉前線) manerana ny firenena.
Mitsotsori-delo noho ny hatsiaka ve ianareo ? sa sery noho ny tsy fahazakàna vovobony ? vanim-potoana indray izao. ” Fotoanan'ny vovobonin'ny sedera.”
Taterin'ny The Japan Times ny vinavina iray fa ny ampahefatry ny vahoaka japoney 123 tapitrisa no voan'ny sery noho ny tsy fahazakàna vovobony rehefa vanim-potoanany. Nefa tsy izany foana no zava-nisy. Raha ny marina, tsy dia nisy loatra ny tsy fahazakàna vovobony hatramin'ny taona 1960.
Nifamatotra akaiky tamin'ny politikan'ny fambolenkazo tany Japana taorian'ny Ady Lehibe faharoa ny fitombon'ny tsy fahazakàna vovobony. Satria nanarin-tena ny firenena, dia nitombo ny fitadiavana hazo, ary ny sedera sy ny kypreso no hazo safidin'ny orinasa mpitrandraka ala.
Na izany aza, maro be ny hazo mora sy nafarana ary ny fitotongan'ny vokatry ny orinasa japoney mpitrandraka ala dia midika fa be dia be ireo hazo tokony ho kapaina no navela hitombo. Maro amin'ireny hazo ireny no 50 taona raha kely indrindra— taona famokarany vovobony betsaka indrindra.
Vovoboninà sedera. Sary avy amin'ny mpisera amin'ny Flickr Tam Tam. Lisansan'ny sary : Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0).
Miaina Ny Rasy Indrindra amin'ny Tsy Fahazakàna Vovobony Ny Mponina An-tanàndehibe
Raha ny any ambanivohitra no andrasana ho betsaka tsy hahazaka vovobony noho ny habetsahan'ny hazo, dia marina ny mifanohitra amin'izany. Any an-drenivohitra, mipetraka amin'ny vato sy simenitra voasesi-by sy ny tàra ny singanà vovobony raha tokony ho trohan'ny tany. Avy eny no ifahoan'ny rivotra azy ireny mba haniry indray.
Nofoanan'ny tanàndehibe any Japana ihany koa ny ankamaroan'ny toeram-piompiana sy ny mpanohana rivotra izay nanampy tamin'ny fanakanana ireo vovobony tsy hihazo ny tanàndehibe.
Isan'ny antony anankiray mahatonga ny olan'ny tsy fahazakàna ny singa tsy hita maso entin'ny rivotra ny fahalotoan'ny rivotra iainana. Ankoatry ny setroka fiarakodia, dia olan'i Japana amin'izao fotoana izao ny loto ateraky ny PM2.5 avy any Shina. Hita tamin'ny fikarohana fa manampy trotraka ny tsy fahazakàna vovobony ny fifangaroany amin'ny singa maloto hafa eny amin'ny rivotra, antony iray mampiakatra ny tahan'ny tsy fahazakàna vovobony any an-tanàndehibe izany, na dia tsy betsaka tahaka ny any ambanivohitra aza ny vovobony.
Tsy lany vokatra isafidianana ireo sarotin-tsery any Japana. Sary avy amin'ny mpisera amin'ny Flickr Andrea Hale. Lisansan'ny sary : Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0).
Ahoana No Hiadian'I Japana Amin'ny Tsy Fahazakàna Vovobony
Fara-faharatsiny, manana ireo vokatra marobe azony isafidianana ireo tsy mahazàka ny vovobony, toy ny sarom-bava, ny solomaso fiarovana, mba hanampy azy ireo amin'ny ady ataony amin'ny vovobony. Ny orinasa japoney Unipac aza moa dia namboatra fitaovana mpanadio rivotra afaka mitroka ny 99%-n'ny vovobony ao anatin'ny adiny iray.
Miha-malaza ihany koa ny fitsaboana amin'ny fanefitry ny ady amin'ny fahasarotiny, izay anomezana ireo marary fatra kelinà ilo-nà vovobony voajanahary amin'ny alàlan'ny tsindrona na atete amin'ny vava mba hisorohana ny tsy fahazakan'ny vatana ny vovobony.
Manomboka amin'ny fiomànana tsara ny andron'ny olona sarotin-tsery. Hano ny fanafody, hosory vazelina ny lavak'orona, anaovy ny tampim-bava sy ny solomason'andro dia mandehana mivoaka. Ajanony vetivety ny fanahiana dia vita ny lalao. Ny fihevina voalohany no manokatra ny làlan-drano. Ny fanalahidin'ny fandresena no tazonin'io fihevina voalohany io. Isan'andro mitohy ny ady.
Mifarana manodidina ny volana May ny vanim-potoanan'ny sery ateraky ny tsy fahazakàna vovobony, mitondra fanamaivanana ilain'ireo tsy mahazaka vovobony izany. Koa satria tsy mankaiza ireo hazo sedera sy kypreso (miaraka amin'ny vovoboniny) amin'ny taona ho avy, dia afaka manantena andianà fahoriana amin'ny tsy fahazakàna vovobony hafa i Japana amin'ny herintaona.
Lafy tsarany, fahasoavana ho an'ireo orinasa mpanamboatra tampim-bava manivana vovobony izany.